China 10 ungqimba wesifunda ibhodi lefekthri-PDA ifektri abakhiqizi | IPandawill
Intengo ye-FOB: US $ 0.85 / Ucezu
Izinhla Izingqimba eziyi-10
Ukujiya kwebhodi 1.20MM
Usayizi wePhaneli Ama-PC angama-300 * 280MM / 2
Izinto I-Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) FR-4
Ukuqedelwa Kwaphezulu ukucwiliswa kwegolide (ENIG)
I-Min Hole (mm) 0.203mm
Impedance Impedance eyodwa & Impedance Ehlukile
Isilinganiso sesilinganiso 6
Isicelo I-PDA emangelengele
Kulesi sigaba, singathanda ukukunikeza imininingwane eyisisekelo mayelana nezinketho zesakhiwo, ukubekezelelana, izinto zokwakha, nemihlahlandlela yokuhlelwa kwamabhodi ama-multilayer. Lokhu kufanele kwenze impilo yakho ibe lula njengonjiniyela futhi kukusize ukuklama amabhodi wakho wesifunda aphrintiwe ukuze alungiselelwe ukukhiqizwa ngezindleko eziphansi kakhulu.
Okujwayelekile Okukhethekile **
Usayizi wesifunda omkhulu 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) ---
Inani lezendlalelo izingqimba ezingama-28 Ngesicelo
Ukucindezela okukhulu 0.4 mm - 4.0mm Ngesicelo
Njengomhlinzeki wobuchwepheshe obuhlukahlukene be-PCB, amavolumu, izinketho zesikhathi sokuhola, sinokukhethwa kwezinto ezijwayelekile lapho umkhawulo womkhawulokudonsa omkhulu wezinhlobo ezahlukahlukene ze-PCB ungambozwa futhi ohlale utholakala endlini.
Izidingo zokunye noma okokusebenza okukhethekile nazo kungahlangatshezwana nazo ezimweni eziningi, kepha, ngokuya ngezidingo eziqondile, kungadingeka izinsuku ezi-10 zokusebenza ukuze kutholwe lokho okubhaliwe.
Thintana nathi futhi uxoxe ngezidingo zakho nomunye wokuthengisa kwethu noma iqembu le-CAM.
Izinto ezijwayelekile ezigcinwe esitokweni:
Izingxenye Ubukhulu Ukubekezelelana Uhlobo lwe-Weave
Izendlalelo zangaphakathi 0,05mm +/- 10% 106
Izendlalelo zangaphakathi 0.10mm +/- 10% 2116
Izendlalelo zangaphakathi 0,13mm +/- 10% 1504
Izendlalelo zangaphakathi 0,15mm +/- 10% 1501
Izendlalelo zangaphakathi 0.20mm +/- 10% 7628
Izendlalelo zangaphakathi 0,25mm +/- 10% 2 x 1504
Izendlalelo zangaphakathi 0.30mm +/- 10% 2 x 1501
Izendlalelo zangaphakathi 0.36mm +/- 10% 2 x 7628
Izendlalelo zangaphakathi 0,41mm +/- 10% 2 x 7628
Izendlalelo zangaphakathi 0,51mm +/- 10% 3 x 7628/2116
Izendlalelo zangaphakathi 0,61mm +/- 10% 3 x 7628
Izendlalelo zangaphakathi 0.71mm +/- 10% 4 x 7628
Izendlalelo zangaphakathi 0,80mm +/- 10% 4 x 7628/1080
Izendlalelo zangaphakathi 1,0mm +/- 10% 5 x7628 / 2116
Izendlalelo zangaphakathi 1,2mm +/- 10% 6 x7628 / 2116
Izendlalelo zangaphakathi 1,55mm +/- 10% 8 x7628
Ukulungiselela 0.058mm * Kuya ngesakhiwo 106
Ukulungiselela 0.084mm * Kuya ngesakhiwo 1080
Ukulungiselela I-0.112mm * Kuya ngesakhiwo 2116
Ukulungiselela 0.205mm * Kuya ngesakhiwo 7628
Ubukhulu beCu bezingqimba zangaphakathi: Okujwayelekile - 18µm no-35 µm,
ngesicelo 70 µm, 105µm no 140µm
I-Tg: cishe. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr ku-1 MHz: ≤5,4 (ejwayelekile: 4,7) Okuningi kutholakala ngokucela
Beka isitaki phezulu
Ukuqoqwa kwe-PCB kuyinto ebalulekile ekutholeni ukusebenza kwe-EMC komkhiqizo. Ukuqoqwa okuhle kungasebenza kakhulu ekwehliseni imisebe evela kuluphu ku-PCB, kanye nezintambo ezixhunywe ebhodini.
Izici ezine zibalulekile maqondana nokucatshangelwa kokuqoqwa kwamabhodi:
1. Inani lezendlalelo,
2. Inombolo nezinhlobo zezindiza (amandla kanye / noma umhlaba) ezisetshenzisiwe,
3. Ukuhleleka noma ukulandelana kwezendlalelo, futhi
4. Isikhala phakathi kwezendlalelo.
Imvamisa akubhekwa kangako ngaphandle kwenani lezendlalelo. Ezimweni eziningi ezinye izici ezintathu zibaluleke ngokulinganayo. Lapho unquma ngenani lezendlalelo, okulandelayo kufanele kubhekwe:
1. Inani lezimpawu ezizohanjiswa nezindleko,
3. Ngabe umkhiqizo kuzofanele uhlangabezane nezidingo zokuphuma zeClass A noma ze-Class B?
Imvamisa kubhekwa kuphela into yokuqala. Empeleni zonke izinto zibaluleke kakhulu futhi kufanele zibhekwe ngokulinganayo. Uma idizayini enkulu izotholakala ngesilinganiso esiphansi sesikhathi nangezindleko eziphansi kakhulu, into yokugcina ingabaluleka kakhulu futhi akufanele inganakwa.
Isigaba esingenhla akufanele sithathwe njengesisho ukuthi awukwazi ukwenza ukwakheka okuhle kwe-EMC ebhodini lezingqimba ezine noma eziyisithupha, ngoba uyakwazi. Kukhombisa kuphela ukuthi zonke izinhloso azinakufezwa ngasikhathi sinye futhi ukuhlehla okuthile kuzodingeka. Njengoba zonke izinhloso ezifunwayo ze-EMC zingahlangatshezwa ngebhodi elinezingqimba eziyisishiyagalombili, asikho isizathu sokusebenzisa izingqimba ezingaphezu kweziyisishiyagalombili ngaphandle kokufaka izingqimba zomzila wesiginali ezingeziwe.
Ukujiya okujwayelekile kokuhlanganiswa kwama-PCB amaningi kungu-1.55mm. Nazi ezinye izibonelo ze-multilayer PCB stack up.
Insimbi Okuyinhloko I-PCB
Ibhodi Yesekethe Eliphrintiwe Lensimbi (i-MCPCB), noma i-PCB eshisayo, luhlobo lwe-PCB olunempahla yensimbi njengesisekelo salo sokusabalalisa ukushisa kwebhodi. Inhloso yengqikithi ye-MCPCB ukuqondisa kabusha ukushisa kude nezakhi zebhodi ezibucayi nezindawo ezingabalulekile kangako njengokusekelwa nge-heatsink yensimbi noma umnyombo wensimbi. Izinsimbi eziyisisekelo ku-MCPCB zisetshenziswa njengenye indlela yamabhodi we-FR4 noma we-CEM3.
Metal Core PCB Izinto kanye Ubukhulu
Ingqikithi yensimbi ye-PCB eshisayo ingaba yi-aluminium (i-aluminium core PCB), ithusi (i-PCB eyinhloko yethusi noma i-PCB yethusi esindayo) noma ingxube yama-alloys akhethekile. Okuvame kakhulu yi-PCB esemqoka ye-aluminium.
Ubukhulu bezinsimbi zensimbi kumacwecwe esisekelo se-PCB imvamisa kungama-30 mil - 125 mil, kepha amapuleti amakhulu futhi azacile kungenzeka.
Ubukhulu bocingo lwe-MCPCB lungaba yi-1 - 10 oz.
Ama-MCPCB angaba lusizo ukuwasebenzisela ikhono lawo lokuhlanganisa ungqimba we-dielectric polymer onomswakama ophezulu oshisayo wokumelana nokushisa okuphansi.
I-Metal core PCB idlulisa ukushisa okuphindwe kasishiyagalombili kuye kwayi-9 kunama-PCB e-FR4. I-MCPCB laminates ihlakaza ukushisa, igcina ukupholisa okukhiqiza izinto kupholile okuholela ekwandeni kokusebenza nempilo.
Langaphambilini Isiphetho sebhodi yesifunda engu-8 se-OSP se-PC eshumekiwe
Olandelayo: 12 ungqimba high tg FR4 PCB yohlelo olushumekiwe